सन्तबीर लामा प्यानल उम्मेदवारको प्रोफाईल - Dhading Post
धादिङ: प्रत्यक्षमा कस्ले कति मत ल्याए, समानुपातिकमा कस्को मत कति (पूर्ण जानकारी) | राजा महन्द्रेका ड्राइभर रमा बृद्धाश्रममा | विजयी उम्मेदवारः कारवाही फिर्ता लिए पार्टीमा फर्किन्छु | मुख्य मन्त्री को-को बन्दै छन् ? | धामीझाँक्रीले बिरामी ठीक पार्दैनन् -सर्वोच्च | धादिङको समानुपातिक मत गणना सकियो यस्तो छ नतिजा | धादिङमा समानुपातिकमत गणना जारी सुर्य अग्र स्थानमा | धादिङका निर्वाचित उम्मेदवारको राजनीतिक पृष्टभुमी | बामगठबन्धनका सुत्रधारले नै हारे चुनाव | बाम गठबन्धन धादिङले सार्वजनिक गर्यो, विजय सभा हुने स्थान र मिति |
सन्तबीर लामा प्यानल उम्मेदवारको प्रोफाईल
मुख्य समाचार, सुचनाहरु
धादिङ १८ साउन । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) को आसन्न निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनमा बनेको सन्तबीर लामा प्यानलका उम्मेदवारहरुको व्यक्तिगत प्रोफाइल यास्तो छ ।
सन्तविर लामा, काभ्रे
सन् १९७३ देखि पर्यटन क्षेत्रमा लागेका लामासंग भरियादेखि मालिकसम्मको अनुभव छ । १४ वर्षको छदा हिमालयन रोवट ट्रेकबाट भरिया हुँदै ट्रेकिङमा हिँडेका लामाले २५ वर्षदेखि लामा एड्भेन्चर एण्ड ट्रेक्स संचालन गरिरहेको छन् ।
सन् १९८२ देखि सन् १९८६ सम्म नेपाल तिब्बत आरोहणको सफल नेतृत्वकर्ता हुन् । त्यतिबेला ४७ पटक ग्रुप लिडर भएर नेपाल तिब्बत आरोहण गरेको अनुभव उनीसंग छ ।
चर्चामा नै नरहेको माउण्ट कैलाशको रुटमात्रै ४ पटक राउण्ड गरेर चर्चामा ल्याउन सफल भएका हुन् । एनएमए अन्तर्गत रहेका २७ वटै हिमाल (पिक) आरोहण गरेका लामाले ७ हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहण गरेका छन् ।
१८ वर्षअघि एनएमएको सदस्यता लिएका लामा १५ वर्षदेखि एनएमएको विभिन्न भुमिकामा छन् । १९९८ मा टानको कार्यसमितिमा बसेर काम गरेका लामा एनएमएमा २ पटक कार्यसमिति सदस्य, एक पटक द्वितीय उपाध्यक्ष हुँदै प्रथम उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पुरा गरेर अहिले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
विगतको अनुभव र दक्षतालाई सदुपयोग गर्दै एनमएमा पारदर्शिता कायम गराउनु लामाको मुख्य एजेण्डा हो । सबै सरोकारवालालाई समेट्दै एनएमएको उद्देश्य पुरा गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त छबि अझ फैलाउने उनको लक्ष्य छ । सिमित व्यक्तिले चलाउदै आएको एनएमए साझा बनाउने र सबैले आफ्नो अनुभूति गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गराउन उनी लागि परेका छन् । पर्वतीय पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै मजदुर, व्यवसायी र आरोहीको हितमा काम गर्न चाहने व्यक्ति हुन् लामा ।
अहिलेसम्म नेतृत्वमा रहेकाहरुले हिमालको भन्दा व्यक्तिगत प्रमोसन धेरै भएकोले संस्थाको उद्देश्य पुरा हुन सकेन भनेर औंला ठड्याउने उनी एकमात्र व्यक्ति हुन् । पुरातन सोच भएका व्यक्तिले एकअर्कामा उत्तराधिकारी तोक्ने परिपाटीको अन्त्य गरेर एक कार्यकाल मात्र नेतृत्वमा रहने वैधानिक व्यवस्था लागु गर्दै संघको उद्देश्य पुरा गराउन सक्ने क्षमता उनीसंग छ । विधानमा रहेका समस्या समाधान गर्ने, सरकार र आरोहीबीच पुलको काम गर्दै व्यावसायिक हितको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई उनले स्पष्टसंग व्याख्या गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय छवीलाई अगाडि बढाउँदै माउण्टेन टुरिजमलाई प्रमोसन गरेर अन्तराष्ट्रिय लेवलको टुरिष्ट नेपालमा भित्र्याउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।’
दिवसविक्रम शाह, काठमाडौ
प्रथम उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार
सन् १९८९ देखि एनएमएमा आवद्ध छन् । दुई कार्यकाल महासचिव, एक कार्यकाल द्वितीय उपाध्यक्ष हुँदै हाल प्रथम उपाध्यक्षको प्रयासी हुन् । अमेरिकाबाट पर्यटनमा स्नातक गरेर छन् । १९९५ मा नेपाल फर्किएपछि पोखरा म्युजियमको डेभलपमेण्ट कमिटिमा काम गरेर विशुद्ध समाज सेवाको भावनाले एनएमएमा निरन्तर नेतृत्व गर्दै आएका शाह २००३ मा निर्विरोध एनएमएको महासचिव भए ।
एनएमएका सस्थापन कुमार खड्गविक्रम शाहका छोरा हुन् । पर्वत आरोहणमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउने अभियान्ताका रुपमा परिचित छन् । हिमाली जिल्लाका बासिन्दाको क्षमता विकास गराउने र पर्वतारोहणका लागि स्थानीयलाई नै सक्षम बनाएर त्यस क्षेत्रको विकास गराउन उनले उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
माया शेर्पा, ओखलढुंगा
द्वितीय उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार
हिमाल आरोहण गर्ने प्रथम महिलाको रुपमा परिचित छन् । ८ हजार भन्दा अग्ला हिमाल चढ्ने नेपालीको एकमात्र महिला हुन् । पर्यटन क्षेत्रमा महिलालाई प्रोत्साहन गराउनु अहिलेको मुख्य मुद्दा हो । पर्वतारोहणमा महिला सहभागिता बढाउन विभिन्न गतिविधि संचालन गरेर अगाडि बढ्दै छन् । अहिलेसम्म १२ वटा हिमालको सफल आरोहण गरिसकेकी छन् । भुकम्पपछि हिमालमा आएको परिवर्तन बुझ्न सगरमाथा चडेर फर्किएकी हुन् । सगरमाथा आरोही संघकी अध्यक्ष समेत रहेकी उनले सगरमाथा मात्रै तीन पटक चढेकी छन् । आउट ओएर ट्रेक एण्ड एक्पेटेसन संचालन गरिरहेकी छन् । उनका श्रीमानले पनि आर्नाेल्ड कोष्टर एक्पीटिसन डटकम संचालन गर्छन् ।
सन् २००३ सालदेखि हिमाल आरोण सुरु गरेकी उनी समग्र आरोहीकी प्रतिनिधि पनि हुन् । उनलाई शेर्मा समुदायले नेतृत्वको निम्ति अगाडि सारेको हो । यसअघि एनएमएको कार्यसमितिमा रहेर काम गरेको अनुभव उनको छ । ‘आरोहीको नाममा धेरै संघसस्था पनि खोलिए, आरोहीको हितका निम्ति केही भएको छैन, मेरो उम्मेदवारी भनेको नै आरोहीहरुको हितमा काम गर्नको लागि हो’ भन्छिन् मायाँ शेर्मा ।
बोधराज भण्डारी, कास्की
सन १९९१ सालदेखि पर्यटन व्यवसायमा संलग्न छन् । टुर्स एण्ड ट्राभलबाट पर्यटन क्षेत्रमा लागेका भण्डारी सन् २००९ बाट ट्रेकिङ एण्ड एक्स्पीटिशन कम्पनी सुरु गरेका हुन् । अहिले धेरै पिक विक्रि गर्ने व्यवसायीको रुपमा चिनिन्छन् ।
पिक प्रमोट गर्नेहरुमा २ वर्षदेखि पहिलो नम्बरमा छन् । यसअघि नाटा, सोट्टो, भिटोफमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । १९९८ मा नाटाको पोखरा च्याप्टर अध्यक्षको नेतृत्व गर्दै व्यवसायिक छाता संगठनमा नितान्त सेवा भावले समर्पित भई आफुलाई सफल नेतृत्व स्थापित गर्दै सस्थालाई अग्रगति प्रदान गर्ने कुशल संगठकको रुपमा व्यवसायी माझ लोकप्रिय छन् ।
स्नोही होराइजन ट्रेक्स एण्ड एक्सपीटिसनको पिक सेलर भएर ४ वर्षअघि एनएमएको सदस्यता लिएका भण्डारी त्यसपछि एनएमएको हरेक गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएका छन् । आरोही र व्यावसायीहरुबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि महासचिवको उम्मेदवारी दिएका भण्डारी एनएमएलाई समयसापेक्ष योजना बनाउने र कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउने दृढताका साथ अघि बढ्दैछन् । एनएमए अब एकल नेतृत्व होइन सामुहिक भावनाका साथ सबैको सहभागितामा चुस्त दुरुस्त नीति र नेतृत्वका साथ पर्यटन क्षेत्रको शिखर सस्था बनाउनु पर्छ भन्ने सन्देश लिएर उनले महासचिवमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
टिकाराम गुरुङ, संखुवासभा
एनएमएका बहालवाला कोषाध्यक्ष हुन् । हिजोको मजदुर अहिलेका सफल व्यवसायी हुन् । कस्मो ट्रेकबाट काम सुरु गरेका उनी सन् २००६ बाट बोचीबोची ट्रेक संचालन गरिरहेका छन् ।
गुरुङ सचिव पदका उम्मेदवार हुन् । नेपालका हिमाल प्रोमोसन गर्नु र अन्तराष्ट्रिय रुपमा एनएमएको प्रोमोसन गर्नु उनको मुख्य उद्देश्य हो । एनएमएलाई राज्यको एउटा अंगको रुपमा स्थापित गराउन लागि परेका छन् । एनएमएको अर्थ नबुझेका धेरैलाई एनएमएका बारेमा प्रशिक्षित गराउनु आवश्यक ठानेका छन् । ‘एकातिर विधान छ काम अर्कै भइरहेको छ । म कोषाध्यक्ष भएपछि आर्थिक निर्देशिका त बनाए तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । आर्थिक अनियमिताता रोक्न र चुस्त र दुरुष्त सचिवालय निर्माण गरी एनएमए सिस्टममा चलाउनका लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।’
सुदर्शन न्यौपाने, धादिङ
कोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवार
१९९३ बाट पथप्रदर्शकको रुपमा पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका न्यौपानेले सन् २००० देखि आफ्नै कम्पनी संचालन गरिरहेका छन् । सन् २०१३ देखि बुटिक होटल चलाउदै आएका न्यौपाने होटल मम्स होमका संचालन हुन् ।
सन् २००७ मा टानको कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि टिम्सको स्थापना र व्यवसायीको हितमा काम गर्ने कुशल अभियान्ताको छबी बनाएका छन् । उनी आवद्ध संघसस्थामा आर्थिक पारदर्शिता र चुस्त प्रशासन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ ।
एनएमएमा कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । एनएमएको श्रोतलाई उचित ढंगले खर्चगर्दै प्रर्यटनमा प्रविधिको प्रयोग मार्फत पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धन गर्न-गराउन कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । टानमा हुँदा देखि नै पारदर्शीतालाई मुख्य एजेण्डा बनाएका उनले एनएमएलाई कोष संचालनका हिसाबले उत्कृष्ट, श्रोत संकलन र आवश्यक ठाउँमा मात्र खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने संकल्प लिएका छन् । मजनदुरको जिवन रक्षा र विभिन्न अल्पाइन क्लवसंग समन्वय विस्तार गर्दै प्रवद्र्धनमा उनको जोड छ ।
म विनय शाक्य हुँ । मेरो घर पाल्ला जिल्लामा पर्छ । टुरिजममा नै मास्टर गरेको छु । टुरिजन अध्यापन गराउछु । एनएमएको एड्मीसन चिफ भएर १७ वर्ष निरन्तर सेवा गरेको अनुभव मसंग छ । सन १९९१ देखि नै पर्यटन क्षेत्रमा लागेको हुँ । अहिले ट्रिपिटक होलिडेज नामको कम्पनी संचालन गरिरहेको छु । एनएमएको प्रकाशन समितिमा छु ।
मेरो उम्मेदवारी भनेको नीतिगत कुरा सुधारको निम्ती हो । झण्झटिला नीति सरल बनाउने र समय सापेक्ष बनाउने कुरामा मेरो विशेष जोड रहनेछ ।
बिङ्मा ग्याबु शेर्मा
म हिमाल आरोही हुँ । म २८ वर्षको भएँ । मेरो घर ताप्लेजुङ हो । सन २०१० देखि हिमालयन गाइडबाट मैले पर्यटन क्षेत्रमा काम थालेको हुँ । त्यसपछि सेभेन समिट र बुचीबुची ट्रेकमा काम गरेको अनुभवले अहिले मैले हिमालयन स्की ट्रेक संचालन गरिरहेको छु । अहिलेसम्म ५ पटक सगरमाथा चढेको छु । ३ पटक मनास्लु हिमाल आरोहण गरिसकेको छु । चाइना र पाकिस्थानमा गएर पनि गाइड गरेको अनुभव मसंग छ ।
मजदुर संगठनबाट मेरो प्रतिनिधित्व हो । आरोहीको विमा बैधानिक सुनिश्चित गराउनु मेरो उद्देश्य हो । कुन हिमाल चढ्न जाँदा कति पारिश्रमिक पाउने भन्ने नियम छैन । त्यसले आरोहि समस्यामा छन् । ती समस्या समाधान गर्न र मजदुरको सोसियल सेकुरिटीको लागि नै मेरो उम्मेदवारी हो ।
सदस्य पदको उम्मेदवार
मेरो घर धादिङ हो । म अहिले ५२ वर्षको भए । नेपाल पञ्छी संरक्षण समिति, पर्यटन सेवा संघमा पनि आवद्ध छु । पर्यटन क्षेत्रमा २४ वर्षको अनुभव छ । मेरो उम्मेदवारी मजदुर संगठनको तर्फबाट हो ।
कामको सिलसिलामा इण्डिया, रस्सा, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, फ्रान्स घुमेर अनुभव बटुलेको छु । हाम्रा हिमाल भनेका विश्वका परिचित छन् । त्यहा आरोहण गर्ने क्रममा घाइते हुँदा पर्वतीय मजदुरको तत्काल उद्धार हुन सक्दैन । विरामी पर्दा उपचार पाउँदैनन् । मजदुरी गरेर खानेहरुको आवाज बुलन्द गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।
मेरो घर धादिङको बसेरी हो । एसियन हाकिङ ट्रेकिङ प्रा.लि. चलाउछु । काठमाण्डौमा बसेर होटल मेनेजमेन्टमा मास्टर्स गर्दैछु । टुरिजम क्षेत्रको २० वर्ष लामो अनुभव मसंग छ । सुरुदेखि नै भरिया भएर धेरै हिमाल आरोहण गरेको छु । एसएलसी पास गरेपछि भारी बोकेर आरोहण गर्ने क्रममा धेरैसंग चिनजान गर्ने मौका पाए । अहिले आफ्नै कम्पनी सुरु गरेको छु ।
पर्वतीय पर्यटनको समस्या नजिकबाट चिनेको छु । त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने तत्कालको समस्या छ । धेरै मजदुर साथीहरुले ज्यान गुमाएका छन् । उनीहरुको परिवारको विचल्ली छ । एनएमएलाई गैर राजनीतिक बनाउँदै पर्यटन क्षेत्रमा बलिदान दिनुहुनेहरुको सम्मान र मजदुरको हितका लागि मेरो उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
मेरो जन्म संखुवासभामा भएको हो । अहिले काठमाडौमा बस्छु । सन् २००७ सालदेखि निरन्तर टुरिजम क्षेत्रमा आवद्ध छु । अहिले बोचीबोची ट्रेक कम्पनीमा आरोही सरदारको रुपमा कार्यरत छु ।
सबै हिमालहरुको प्रचार प्रसार गर्दै ती हिमालहरुको प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । धेरैभन्दा भेरै अन्तराष्ट्रिय पर्यटक नेपाल भित्र्याउने र हिमाल आरोहणमा लैजान सकियो भने पर्यटन व्यवसाय अझ फस्टाउनेछ । ती पर्यटकहरुबाट स्थानीयहरुले पनि प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन् । व्यवसायीको व्यवसाय फस्टाउनु भनेको नै आरोेही मजदुरको पेशा सुरक्षित हुनु हो । त्यसकारण अहिले एनएमएमा भएका सबै हिमालको अझ प्रचार गर्ने र नयाँ पिकहरुको पहिचान गरेर त्यस्ता पिकहरुमा पर्यटक लैजानको लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।
म काठमाण्डौको बासिन्दा हो । मेरो कुनै कम्पनी छैन । २० वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध छु । मेरो कार्यव्यस्तताले अहिलेसम्म यो सस्थाको जिम्मेवार भूमिकामा नभएपनि साधारण सदस्य रहेर नै लामो समयदेखि पर्यटन प्रवद्र्धको लागि सेवा गरेको छु । अहिलेचाही अन्य सबैबाट अवकास लिएपछि कार्यकारी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छु ।
नेपाल बैक लिमिटेडका कोषाध्यक्षबाट अवकास लिएपछि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको कोषाध्यक्ष भएँ । पछिल्लो समय एसिया काठमाडौ लेवीमा आवद्ध छु । एनएमएमा अहिलेसम्म स्वयसेवी भावले सहयोग गरिरहेको र पर्यटन क्षेत्रमा भएको अनुभव साट्नका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । मेरो अनुभवले व्यवसायी, आरोही र मजदुर सबैको हितमा नीति निर्माण गर्नेछ ।
धादिङ: प्रत्यक्षमा कस्ले कति मत ल्याए, समानुपातिकमा कस्को मत कति (पूर्ण जानकारी)
राजा महन्द्रेका ड्राइभर रमा बृद्धाश्रममा
विजयी उम्मेदवारः कारवाही फिर्ता लिए पार्टीमा फर्किन्छु
मुख्य मन्त्री को-को बन्दै छन् ?
धामीझाँक्रीले बिरामी ठीक पार्दैनन् -सर्वोच्च
महासंघका पुर्व अध्यक्ष शिव गाउँले युएई आउदै
धादिङको समानुपातिक मत गणना सकियो यस्तो छ नतिजा
धादिङमा समानुपातिकमत गणना जारी सुर्य अग्र स्थानमा
धादिङका निर्वाचित उम्मेदवारको राजनीतिक पृष्टभुमी
बामगठबन्धनका सुत्रधारले नै हारे चुनाव
बाम गठबन्धन धादिङले सार्वजनिक गर्यो, विजय सभा हुने स्थान र मिति
धादिङमा वाम गठबन्धनले गर्यो विशाल विजय र्याली
धादिङ मंसिर २८ । संविधान कार्यन्वयनको चरणमा मुख्य ३ वटा (स्थानिय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा) तहको लागि निर्वाचन सम्पन्न भै सकेका छ । अब राष्ट्रिय सभा गठन मात्र बाँकी छ
सोनु सिजापती, मंसिर २८ । नेपालका तात्किालिन राजा महेन्द्रका गाडी चलाउने ड्राइभर अहिले पनि जिउँदै छिन् । राजा महेन्द्रबाट गडी उपहार समेत पाएकी यी आमा त्यस बेला धनी परिवार मध्य
(प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका अगाडि नेपाली कांग्रेससमेत कमजोर देखिएका बेला हुम्लाको एकमात्र निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छक्कबहादुर लामा विजयी भएका छन् । माओवादीका पोलिटव्युरो सदस्य समेत
© 2017, एन.एस.मिडिया धादिंगद्वारा सञ्चालित www.dhadingpost.com